विचार Archives - तामाचुली खबर
समाजसेबी राजु शाहीले दुईजना क्यान्सर पिडित लाई सहयोग गरेकाछन्। दैलेखि चेलि दिलमाया सोनि दैलेख ना पा १ मा बस्ने। हाल नेपाल क्यान्सर अस्पताल ललितपुरमा उपचार भइरहेको छ। भन्ने त्यस्तै अर्का कैलाली जिल्लाको टिकापुर १ मा बस्ने लोकेन्द्र रावल लाइ सहयोग गरेका छन्। लोकेन्द्र रावल को हाल भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।उहाँ दुबै जना लामो समय देखि क्यान्सर रोगको पीडित हुनु हुन्छ। उँहालाई उपचार गर्नको लागि पर्याप्त रकम नभएको जानकारी
मजदुर श्रमिकका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ! सह_सयोजक टेकेन्द्र मल्ल
तुलबीर/तमाचुली खबर नेपालगंज १९ वैशाख । अनेरास्ववियू बाँकेका सह-सयोजक टेकेन्द्र मल्ल ले १३१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मजदुर श्रमजीवीलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ। विश्वव्यापी महामारीका रुपमा देखा परेको कोभिड–१९ नामक घातक भाइरसको सामना गर्न सिङ्गो विश्व नै संघर्षरत रहेका कारण अहिले संसारभरका श्रमजीवि मजदुरहरुको रोजगारी गुमिरहेको उहाँकाे भनाइ छ । ‘दैनिक ज्याला गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने राजधानी लगायतका विभिन्न सहरमा रहेका निम्न वर्गीय श्रमजीवी जनताको
भन्छन् मान्छेले आधा जीवन त सुतेरै बिताउँछ। निद्रा जीवनलाई गतिशील बनाउनका लागि जरुरी पनि छ। गहिरो निन्द्रा र आरामदायी सुताइ नै अर्को दिनका लागि ऊर्जा हुन् । यही सुताइ बिग्रियो भने दैनिकी मात्रै खलबलिदैन, स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर हानी पुर्याउँछ । एक अध्ययन अनुसार विश्वमा २२ प्रतिशत मानिस रातको समयमा राम्रोसँग सुत्न सक्दैनन् भने ४७ प्रतिशत मानिस तनावकै कारण सुत्न सक्दैनन् । त्यस्तै ३९ प्रतिशत मानिस मात्रै आरामसँग सुत्ने गर्छन् ।
बझाङ/हुम्ला, २९ फागुन । चीनको ताक्लाकोटमा अलपत्र नेपालीले सरकारबाट उद्धार नभए ‘भागेरै’ नेपाल छिर्ने बताएका छन् । त्यहाँ रहेका १ सय ४८ जनामध्ये २३ जनाले ‘जसरी पनि घर फर्कने’ तयारी गरेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट डराए पनि घर फिर्न हिमपातले बाटो अवरुद्ध गरेकाले हिम्मत नगरी उनीहरू उतै रहेका हुन् । केही दिनअघि एक नेपाली भागेरै नेपाल फर्किएका थिए । उक्त क्षेत्रमा हालसम्म कसैलाई पनि संक्रमण छैन । संक्रमणबाट जोगिन सतर्कताका लागि केही समय
Tamachuli khabar March 6, 2020 0
रातिको समयमा निन्द्रा नलाग्ने स म स्या पछिल्लो समय बढिरहेको छ ।व्यस्त जीवनशैली, त नाव, मोबाइल लगायतका उपकरणका कारण राति निन्द्रा नपर्ने स म स्या रहेका छन् । हिन्दू धर्मशास्त्रका विभिन्न ग्रन्थले भने सुख शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि रातिको निद्रासँग ग हिरो सम्ब न्ध रहने बताउँछ । राति राम्रो निद्रा परेन भने शरीर आल श्य बन्छ ।दिनभर थकानको अनुभव हुन्छ । त्यसैले दिनभरको थकान मेटाउन राति निद्रा अर्थात रातभरीको
भाग्यमा खोजेर पाउने भनेको त दु:ख मात्र हो, सुख त आफुले मेहनत गरेर पाउने हो
“पैसा” अनि “बैस” जिन्दगीभर रहदैन, त्यसैले बाचुन्जेल अहम होइन नम्र भएर बाच अनि हास यति धेरै पनि नरिसाउनुस् आफ्नासंग कि पछि गएर बोल्नको लागि वाक्य होइन बहाना खोज्न परोस १., २. “पैसा” अनि “बैस” जिन्दगीभर रहँदैन, त्यसैले बाचुन्जेल अहम होइन नम्र भएर बाच अनि हास । घोच्ने काडा हरु भन्दा खतरनाक हुन्छन बोलीने बचनहरु, काडाले घोचेको त उपचार पछि निको हुन्छ तर बचनले घोचेको त बल्झीरहन्छ ।३., ४. बिर्सियो भनेर
Tamachuli khabar March 2, 2020 0
काठमाडौं, १९ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै चाँडै काममा फर्किने दृढता जाहेर गर्नु भएको छ । आफ्नो दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सोमबार भर्ना हुनु पूर्व ३ मिनेट १९ सेकेण्ड लामो भिडियो सन्देश देशवासीका नाममा जारी गर्दै उहाँले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै संघर्ष चल्दै आएको बताउदै बताउनु भयो । आफ्नो जीवनको कुनै समयमा लोकतन्त्रविरुद्धको संघर्ष, कुनै
खुसीलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ? खुसी आफ्नो चाहनासँग सम्बन्धित हुन्छ । चाहना र खुसी जोडिएको छ । हामी कस्तो हुन चाहन्छौँ भन्ने कुराले हाम्रो खुसी निर्देशित हुन्छ । त्यसकारण खुसी भनेको एक प्रकारको दृष्टिकोण हो । जसले आफूलाई सन्तुष्ट लाग्ने कुराहरु खोज्न अभिप्ररित गर्दछ । खुसी र दृष्टिकोण एकआपसमा जोडिएको छ । दृष्टिकोणले खुसी दिने हो । खुसी एउटा यस्तो दृष्टिकोण हो जसले हामीलाई सन्तुष्ट दिन्छ । खुसी हुनको लागि
Tamachuli khabar February 29, 2020 0
शनिवारको दिन शनिदेवको विशेष दिन हो । र, शनिदेवलाई न्यायका देवता मानिन्छ । शनिदेवलाई प्रसन्न गर्नका लागि यस दिन सर्सिउको तेल, कालो तिल आदी चढाइन्छ । ज्योतिषीय मान्यता अनुसार जसको कुण्डलीमा शनिदोष हुन्छ उनीहरुले शनिदेवको पूजा गर्न जरुरी छ । शनिवारको दिन केही काम गर्न वर्जित गरिएको छ– आपँको अचार खानबाट बच्नुहोस् । काँचो आँप अमिलो हुन्छ र शनि देव यस्तो चिजको विरोधी हुन् । शनिवारका दिन रातो खुर्सानी नखानुहोस्